समाचार – Page4– Ramjham Nepal
Home>>समाचार (Page 4)
नमस्कारको आध्यात्मिक महत्त्व
२२ चैत्र २०७६, शनिबार २२:२६ 99 Views0
हिन्दूहरूको पहिचान बनेको नमस्कार वा नमस्ते साधारण परम्परा होइन, यसका त कैयौं भौतिक र आध्यात्मिक फाइदा छन् । नमस्कार शब्दको उत्पत्ति नमः बाट भएको हो । नमस्कारको अर्थ हुन्छ, सबै मनुष्यको हृदयमा रहेको दैवीय चेतना र प्रकाशप्रतिको सम्मान । एक आत्माले अर्को आत्माप्रति सम्मान र आभार प्रकट गर्नका लागि बनेको शब्द हो नमस्कार । मिलाएर नमस्ते गर्दा दुवै हात अनाहत चक्रमा राखिन्छ, आँखा बन्द गरिन्छ अनि शिरलाई झुकाइन्छ । हातलाई हृदय चक्रमा ल्याएर दैवी प्रेमको बहाव ल्याउन सकिन्छ । नमस्कार गर्दा शिर झुकाउने र आँखा बन्द गर्ने भनेको हृदयमा विराजमान ईश्वरप्रति आफैंलाई सुम्पिने काम हो । तपाईंलाई साह्रै रिस उठ्यो भने तत्कालै रिस उठेको मानिसलाई नमस्कार गरिदिनुस् । दुवै हात जोडिनेबित्तिकै रिस मरिहाल्छ । अनि अर्को मानिस पनि तपाईंको नमस्ते देखेर तपाईंमाथि रिस प्रकट गर्न सक्दैन । हात जोडेर नमस...
१९ चैत्र २०७६, बुधबार ०७:३८ 114 Views0
१९ चैत्र २०७६, बुधबार ०६:४४ 94 Views0
कोरोना भाइरसको महामारीले अहिले विश्व अक्रान्त बनेको छ। विश्वका शक्तिशाली देशहरु पनि यो महामारीका अगाडि घुडा टेकेका छन्। अमेरिका, बेलायत, इटाली, स्पेन, जर्मनी, फ्रान्स, दक्षिण कोरियाजस्ता देशमा यो महामारीले विकराल रुप लिएको छ। तर कोरोना भाइरसको उदगम स्थाल चीनमा भने यतिबेला महामारी शून्यमा झरेको छ।कोरोना भाइरसको महामारी विश्वमै फैलिरहेको बेला यो पहिलोपटक कुन व्यक्तिमा लागेको होला भन्ने आम चासो हुनसक्छ। हालै चीनको उहानमा एक नर्सले यसको राज खोलेकी छन्। कोरोना भाइरसको संक्रमण पहिलोपटक एक ५७ वर्षीया महिलामा देखिएको थियो। उनी चीनको उहानमा झिंगे माछा बेच्ने काम गर्थिन्। उहानको एक अस्पतालमा कार्यरत नर्सका अनुसार उनको नाम बेइ गुइजियान हो। उनमा नै कोरोना भाइरसको पहिलो संक्रमण भेटिएको थियो। अहिले उनी निको भइ घर फर्किसकेकी छन्। एक महिनाको उपचारपछि उनी घर फर्किएकी थिइन्। डिसेम्बरमा देखिएको कोरोना...
१६ चैत्र २०७६, आईतवार ०९:४३ 155 Views0
आउनुहोस् अमेरिका सरकारले दिने Stimulas Plan वा CORONA Recovery Rebate बारेमा केही जानकारी लिउँ: - तपाईंले 2018 वा 2019 को Tax File गर्नु भएको छ र त्यहाँ Bank Account Information दिनु भएको छ भने तपाईंले प्राप्त गर्ने रकम त्यहीँ जम्मा हुनेछ। -यदि Tax File गर्नु भएको छैन वा File गर्दा पनि Bank Account No दिनु भएको छैन भने हुलाक मार्फत चेक प्राप्त हुनेछ। -Direct Deposit April को दोश्रो हप्तासम्ममा जम्मा हुनसक्छ र Mail मार्फत त्यो भन्दा अलिकति ढीलो हुनसक्छ । -यदि तपाईंले 2018 र 2019 दुबैको Tax File गर्नु भएको छैन भने केही दिन पछि IRS लाई कल वा ईमेलमा सम्पर्क गर्नु होला, हुनसक्छ यस्तो Case मा रकमको लागि छुट्टै आवेदन गर्नु पर्ने हुनसक्छ । -यो Recovery Rebate हाललाई एकपटकलाई भनिएको छ, फेरि अर्कोपल्ट् दिनलाई सरकार गम्भीर छ । -प्राप्त रकममा Tax लाग्ने छैन । -तपाईंको बिगतमा ...
१२ चैत्र २०७६, बुधबार ०१:१९ 109 Views0
अमेरिका : अमेरिकामा कोरोना (कोभिड १९) भाइरसको संक्रमणबाट एक गैरआवासीय नेपालीको मृत्यु भएको छ। न्यूयोर्कको कुइन्सस्थित ज्याकशन हाइटक्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका ५० वर्षीया अनिल (रमेश) लिम्बुको मृत्यु भएको हो। नेपालमा पाँचथर जिल्ला साविक रानीगाउँ गाविस घर भएका लिम्बु १८ वर्षदेखि अमेरिकामा बासोबास गर्दै आएका थिए। लिम्बुका श्रीमती, दुई छोरा र एक छोरी छन्। लिम्बुले सुगर र ब्लड प्रेसरको औषधी सेवन गर्दै आएको परिवार श्रोतले जानकारी दिएको छ। उनको परिवारका सबै संक्रमित छन्। परिवारका बाँकी सदस्य घरमै बसिरहेका छन्। हालसम्म अमेरिकामा अन्य तीनजना नेपालीलाई कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। न्यूयोर्क राज्यको कुइन्समा बसोबास बसोबास गर्दै आएका ४७ र ५५ बर्षका दुईजना नेपालीलाई संक्रमण पुष्टि भएको हो। त्यसैगरी भर्जिनियाको फेरफाक्समा बसोसबास गर्दै आएकी एक ३८ वर्षीय महिलालाई संक्रमण पुष्टि भएको हो।...
११ चैत्र २०७६, मंगलवार २३:१५ 138 Views0
नेपाल सरकारले कोरोनाभाइरसको जोखिमलाई ध्यान दिँदै मङ्गलवार बिहानबाट लागु हुनेगरी अत्यावश्यक सेवाबाहेक अरू कामका लागि घरबाहिर निस्किन नपाउने गरी 'लकडाउन' गर्ने आदेश जारी गरेको छ। उक्त निर्णय मङ्गलवार बिहान ६ बजेबाट लागु भई चैत १८ गते बिहान ६ बजेसम्म कायम रहने स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले बताए। उनले भने, "कोभिड-१९ को रोकथाम गर्नका निम्ति मानिसहरू बीचको दूरी कायम गर्नका लागि अझ प्रभावकारी बनाउन हामीले अत्यावश्यक सेवाबाहेक अन्य सम्पूर्ण सेवालाई यथास्थितिमा राख्ने र व्यक्तिहरू घरबाहिर ननिस्किने खालको एउटा वातावरण बनाउन अपील गर्ने निर्णय गरेका छौँ।" सरकारले उक्त अवधिमा औषधोपचार र खाद्यवस्तुको खरिदजस्ता अत्यावश्यक कामबाहेक अन्य कोही पनि घरबाट निस्किन नपाउने उल्लेख गरेको छ। निर्णय अनुमतिप्राप्त बाहेक सबै प्रकारका सार्वजनिक र निजी सवारीसाधनमा रोक लगाइएको छ। सुरक्षा निका...
९ चैत्र २०७६, आईतवार ०१:४० 42 Views0
Comedy Champion – Episode 28
९ चैत्र २०७६, आईतवार ०१:३८ 159 Views0
Comedy Champion – Episode 27
९ चैत्र २०७६, आईतवार ०१:३६ 210 Views0
अन्तत निर्भायाका बलत्कारीहरुलाई फाँसी : यसरी चढाइयो फाँसीमा
९ चैत्र २०७६, आईतवार ०१:१८ 92 Views0
भारत - १६ डिसेम्बर २०१२... दिल्लीको सडकमा राती गुडिरहेको बसभित्र निर्भयामाथि ६ व्यक्तिले सामूहिक बलात्कार गरे । यी ६ व्यक्तिमध्ये राम सिहंकले जेलभित्रै आत्महत्या गरे । उनी बसका ड्राइभर थिए र मुख्य आरोपी थिए । एक नाबालिक थिए जसले ३ वर्षको जेल सजाय काटेर २० डिसेम्बर २०१५ मा रिहा भइसकेका छन् र कतै आनन्दले आफ्नो जीवनयापन गरिरहेका छन् । बाँकी रहे चारजना । उनीहरुको नाम थियो – मुकेश सिंह, पवन गुप्ता, विनय शर्मा र अक्षय ठाकुर । यी दोषीले आफ्नो अपराधको सजाय ७ वर्ष ३ महिना र ४ दिनपछि पाए । चारै दोषीलाई तिहाड जेल नम्बर–३ मा २० मार्चको बिहान साढे ५ बजे झुण्ड्याइयो । फाँसी दिनका लागि जल्लाद पवन १७ तारिखमै तिहाड जेल पुगिसकेका थिए । तर फाँसीको केही घण्टाअघि यी दोषीमाथि के–के भयो ? फाँसीमा चढाउने पूरा प्रक्रिया के हो ? यसबारे भास्करले जानकारी दिएको छ । १. दोषीलाई फाँसी बिहान साढे पाँच बजे दिइयो, त...